YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 19
မဲဘယ်လိုခိုး၊ ဘယ်လိုလိမ်ကြသလဲ (၁)။
(ပြန်လည်မျှဝေ ပေးပို့ လာသော အရှင် revaggavomsa အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/19/20120အကြံပြုခြင်း
''(၁) လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်နေ့ရက်မှာ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်မျှသာ လိုပါတော့သည်။
(၂) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်က ပြင်ဆင်နေသူများ၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်ပါတီဝင် အသီးသီး၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေသူများမှာလည်း အတော်ခရီးရောက်သည့် အချိန်အခါဖြစ်ပါသည်။
(၃) ယခုအချိန်အခါထိ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး လုံးပမ်းနေရသည့်ကိစ္စမှာ မဲစာရင်းများမှန်ကန် ပြည့်စုံရေးပင်ဖြစ်သည်။
(၄) မဲစာရင်းများတွင် မှားယွင်းမှု၊ မပြည့်စုံမှုများမှာ အလွန်များပြားနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မှားယွင်းမှု၊ မပြည့်စုံမှုများအနက် အောက်ပါမြို့နယ်(၂)ခု၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
(က) သေဆုံး၍ မဲစာရင်းမှပယ်ဖျက်ပေးရန် ရွာပေါင်း (၅၄)ရွာအတွက် ၄၁၃ ယောက်
(ခ) မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးရန် ၁၃၈၇ ယောက်
(ဂ) မဲစာရင်းတွင်ပိုနေသူ ၂၉၉ ယောက်
(က) ကျေးရွာအုပ်စုများစွာသို့ မဲစာရင်းများ ၅.၃.၂၀၁၂ ထိရောက်ရှိမလာပါ။
(ခ) ၁၂.၃.၂၀၁၂ ထိ မဲစာရင်းကူးယူခွင့် မရရှိသေးပါ။
ယင်းအခြေအနေတွင် မဲစာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက် စီစစ်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သေးပါ။
''၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မတရားသောလုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြား လာပါသည်။ ယင်းပြဿနာများအနက် အချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
(က) စမြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၎င်းတို့ပါတီအစည်းအဝေးသို့ တစ်အိမ်တယောက် မတက်မနေရတက်ရောက်ရန် ၁၆.၃.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ပေးဖိတ်ကြားမှု ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရှိရသည်။
(ခ) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာစန်းဝင်းဆိုသူက
(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ပုတ်ခတ်ပြောဆို ဟောပြောခြင်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေပါသည်။
(၂) ပျဉ်းကိုင်းကြီးအုပ်စုတဲကြီးရွာမူလလွန်ကျောင်းကို ငွေကျပ် ၃ သိန်းခွဲလှူဒါန်းခဲ့သည်။ (လှူဒါန်းငွေမှာ မိမိပိုင်ငွေ သို့မဟုတ် အစိုးရငွေဖြစ်သည်ဟုမသဲကွဲပါ။) ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါက နောက်ထပ်ငွေ ၃ သိန်းခွဲပေးလှူမည်ဟုဟောပြောခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်မှာမဲဝယ်ခြင်းဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ လောင်းလုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒအတွက် ကြိုတင်မဲများကို ကောက်ယူလျက်ရှိသည်ဟု သတင်းဌာနများမှ ကြားသိနေရပါသည်။ ကြိုတင်မဲနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်က မတ်(၃၀.၃.၂၀၁၂)ရက်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၂)ရက်အထိတွင်သာ ကောက်ယူရန်ညွှန်ကြားချက်ကို ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနှောက်အယှက်များကိုတွေ့နေခဲ့ရာမှ ၁၈.၃.၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းသူ၏ဟောပြောပွဲတွင် သစ်သားချွန်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် ဦးမင်းသူ၏ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုကို အဖွဲ့ချုပ်က အစဉ်အမြဲဆန့်ကျင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့လည်းအရေးယူပေးနိုင်ရန် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါကိစ္စများသည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာစေရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကျေညာလိုက်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်'' ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မြောင်းမြမြို့နယ် အတွင်းရှိ မဲစာရင်းများတွင် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံး မပါရှိခြင်း၊ ပါဝင်သော်လည်း ကွဲလွဲမှားယွင်းခြင်း၊ သေဆုံးပြီးသူများ ပြန်လည်ပါဝင်နေခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် နံပါတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် မဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦးထက် ပိုမို ပါဝင်ခြင်းများ ရှိကြောင်း မြို့ခံမဲဆန္ဒရှင်များက အထောက်အထားဖြင့် ပြောကြား
Monday, 19 March 2012 00:31
လွန်ခဲ့သည့် မတ်လဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် မဲပေးရမည့် လူဦးရေစာရင်းတွင် လွဲမှားမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း မြောင်းမြမြို့မှ မဲဆန္ဒရှင်များက အထောက်အထားများဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ကွဲလွဲမှားယွင်းသည်ဟု ဆိုရာ၌ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံး မဲပေးရမည့် စာရင်းတွင် ပါဝင်မလာခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင် တစ်ဦးကျန်၊ နှစ်ဦးကျန် ကျန်ရှိနေခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုတည်းဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးထက် ပိုမိုပါဝင်နေခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်များ မှားယွင်းခြင်း၊ နေရပ်များ မှားယွင်းခြင်း၊ အဖအမည်များ မှားယွင်းခြင်းအပြင် သေဆုံးပြီးသူများ ပါဝင်ခြင်းများရှိကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်မတို့ မိသားစုက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မဲပေးဖို့ စာရင်းကြေညာတော့လည်း ပါလာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတာ ငါးဦးရှိပါတယ်။ အခု မဲပေးရမယ့် စာရင်းကပ်တာကိုသွား ကြည့်တော့ တစ်မိသားစုလုံး ပါမလာဘူး။ ကျွန်မတို့က ဒီမှာပဲအိမ် တိုင်တွင်းစွတ်နဲ့ တစ်သက်လုံး နေလာတာ။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း အပြည့်အစုံ ရှိတယ်။ မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်။ လမ်းမတန်းမှာလည်း နေတယ်။ အိမ်ကျော်သွားစရာ အကြောင်းကို မရှိတာပါ။ ကင်းစောင့်ခ၊ မီးခနဲ့ ရပ်ကွက်က ကောက်သမျှ ကုန်ကျစရိတ်တွေကျတော့ တစ်ခါမှ အိမ်ကျော်သွား တာမရှိဘူး။ မဲပေးရမယ့် စာရင်းကျတော့ တစ်မိသားစုလုံး ကျန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့နားမှာပဲ အိမ်ထောင်စုလိုက် ကျန်ခဲ့တာတွေ တော်တော်ရှိတယ်'' ဟု အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် အတွင်းနေ ထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
''ကျွန်တော်တို့က မဲစာရင်းမှာ တော့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်တွေ လွဲနေတယ်။ တစ်ဦးကျန်၊ နှစ်ဦးကျန်တွေ အများကြီးပဲ။ အဖေနာမည်တွေ လွဲနေတာ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင် လွဲနေတာတွေက အများဆုံးပဲ။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားလည်း ဖြစ်သလို ဘယ်သူ့ပြောရမှန်း မသိတာနဲ့ မပြောဖြစ်တဲ့သူ အများကြီးရှိပါတယ်'' ဟု သူဌေးကုန်းရပ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
''ကျွန်မတို့က ရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ လမ်းထဲမှာ သာရေးနာရေးနဲ့ ရပ်ကွက်အရေးအတွက် ရပ်မိရပ်ဖလို နေတာပါ။ မသိတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ မဲစာရင်းကောက်တဲ့ ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူတွေလည်း အကူအညီလိုရင် အမြဲလာနေကျပါ။ ဒါပေမယ့် မဲပေးရမယ့် စာရင်းမှာ ပါမလာဘူး။ တစ်မိသားစုလုံး မပါတာ။ ရပ်ကွက်အတွက် လိုအပ်တာ လာကောက်တဲ့အခါ မေးကြည့်တော့ ပါပါ မပါပါ သိပ်မှအရေးမကြီးတာလို့ ပြောသွားတယ်''ဟု မြို့ခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
''ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ သတင်းက အစုံပဲ။ မဲတစ်မဲကို ကျပ် ၄၀၀၀၀ လောက်နဲ့ ပေးဝယ်မယ်။ အောင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့သူတွေက စည်းရုံးရေးလို့ မပြောဘဲနဲ့ လယ်သမားတွေကို ငွေထုတ်ချေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုးနဲ့ စုခေါ်ပြီး အဲဒီရောက်မှ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပါတီတစ်ခုက မဲဆွယ်တာမျိုးဖြစ်တာတွေလည်း ကြားနေရတယ်။ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဟောပြောတဲ့ နေရာကိုလာဖို့ ပါတီတစ်ခုကနေ တစ်ဦးကို ကျပ် ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀၊ ၅၀၀၀ ပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်တာတွေ လည်းရှိတယ်၊ မရှိတဲ့သူတွေကတော့ သွားတယ်လို့လည်း ကြားရတယ်'' ဟု မြောင်းမြမြို့ခံတစ်ဦးကလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
''ခရိုင်ကော်မရှင်က ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာ ဥပဒေမှာ ပါပြီးသားပဲလို့ ပြောတယ်။ မြို့နယ်ကော်မရှင်ကတော့ ပထမမေးတော့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်အထိ ရတယ်ပြောတယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ်မေးတော့ ပြင်ဆင်ပေးလို့ မရဘူးလို့ ပြောပြန်ရော။ တချို့ ရပ်ကျေးကော်မရှင်တွေကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ တင်ပြတာကို မဲဆွယ်တယ်ထင်ပြီး လုပ်ပေးဖို့အကြောင်းကို အတိအကျမပြောဘူး''ဟု မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့အထိ အခြေအနေကို မြောင်းမြမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံ ဦးမြင့်လွင်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မျိုးသန့် | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၂ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် နီးကပ်လာချိန်တွင်
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မတရား လုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုမိုများပြားလာပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ထိခိုက်
စေနိုင်သည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
NLD ရွေးကောက်ပွဲ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့၏ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေကြာချက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မသမာမှုများကြောင့် “လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ
ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်” ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မင်းကင်းမြို့နယ် စမြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ ဆန်းဝင်း မှ ကျေးရွာလူထုကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သူ၏ပါတီ အစည်းအဝေးသို့ တအိမ်တယောက် မတက်မနေရ တက်ရောက်ရန် အမိန့်ပေး ဖိတ်ကြားခြင်းရှိသည်ဟု NLD မှ စွပ်စွဲထားပြီး NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ဒေါက်တာဆန်းဝင်း က ပုတ်ခတ် ပြောဆိုမှုများ ရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ မတ်လ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက်နေ့များတွင်သာ ကြိုတင်မဲ ကောက်ယူရန် ညွှန်ကြား ထားသော်လည်း တနင်္သာရီတိုင်း လောင်းလုံမြို့နယ်တွင် ကြိုတင်မဲများ ကောက်ယူနေသည်ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက် တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ကြေညာချက်အရ နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင်လည်း NLD ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းသူ၏ တနင်္ဂနွေနေ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွင်း သစ်သားချွန်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြုံခဲ့ရပြီး လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
NLD က ထုတ်ပြန်သည့် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ကြေညာချက်တွင်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ်အတွင်း မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းတွင် ရွာပေါင်း ၅၄ ရွာမှ သေဆုံးပြီးသူ ၄၁၃ ယောက် ပါဝင်နေခြင်း၊ မကွေးတိုင်း တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်တွင် မတ်လ ၅ ရက်နေ့အထိ မဲဆန္ဒရှင် အရေတွက် ထုတ်ပြန်ပေးမှု မရှိသေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု
ထိုဖြစ်ရပ်များအပြင် ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြမြို့နယ် ရှမ်းရေကျော် ကျေးရွာတွင်လည်း NLD ရုံးအတွင်း စိုက်ထူထား
သော အလျား ၆ ပေ၊ အနံ ၄ ပေရှိ မဲဆွယ် ပိုစတာကြီး သုံးချပ်၊ မဲပေးနည်း ပိုစတာ တချပ်၊ စုစုပေါင်း လေးချပ်တို့အား မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ချွန်ထက်သည့် အရာဖြင့် လှီးဖြတ်ထားမှု ကြုံခဲ့ရသည်ဟု မြောင်းမြမြို့နယ် NLD ရွေးကောက်ပွဲ
အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းရွှေက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ဖျက်တာက ဦးမန်းဂျော်နီရဲ့ ပုံကို ထွင်းလှီးသွားတယ်။ ပိုစတာတိုင်းမှာ ဦးမန်းဂျော်နီရဲ့ပုံကို ထွင်းလှီးတာပေါ့။ မဲပေးနည်း လမ်းညွှန်မှာက ဦးမန်းဂျော်နီဆိုတဲ့ ပိုစတာနဲ့ အလယ်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမှတ်အသားနဲ့
နောက်က ကွက်လပ်ထဲမှာ အမှန်ခြစ် ပြထားတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ဦးမန်းဂျော်နီဆိုတဲ့ စာသားကို လှီးထုတ်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မြောင်းမြမြို့နယ် မြို့မရဲစခန်းတွင် တနင်္ဂနွေနေ့က အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားရာ ရဲစခန်းက အမှုအမှတ် ပ/၇၄ ဖြင့် လက်ခံထားပြီး ရှမ်းရေကျော်ရွာသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးနေပြီဟုလည်း “ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့၊ ကျနော့် အမှုစစ် ခုပဲ ဆင်းသွားပါပြီခင်ဗျာ့” ဟု မြောင်းမြမြို့မ စခန်းမှူး ဦးစိန်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုး နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် မောင်းရမ်းရွာတွင်လည်း မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်နှင့် ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်များတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်သည့် စာရွက်ငယ်များ ဖြန့်ဝေမှုများ ရှိခဲ့သည်။
အမေစုက လူထုကို ကားနဲ့ လိုက်စည်းရုံး - ဦးအောင်သောင်း က ကားနဲ့တိုက်သတ်ပြီး စည်းရုံးသွား
ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့သည် ဝက်လက်ရွာကို စည်းရုံးရေးဆင်းရာမှာ နတ်နွားတော်ပို့
ရွာအနီးတွင် ဦးကံစိန်ဆိုသည့် အဘိုးအို တဦးကို စည်းရုံးရေး ခရီးထွက်လာသည့် ယာဉ်တန်းမှ ကားတစီးက တိုက်မိပြီး နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည့် ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း မှ နေရာမှာတင် အပြီးဖြေရှင်းရန် ညွှန်ကြား
ပြီး ဝက်လူး ရွာကို ဆက်လက် ထွက်ခွာတယ်လို့ သိရပါသည်။ သေဆုံးသူမှာ နတ်နွားတော်ပို့ရွာ အနီးမှ ပြရာ
ကျေးရွာက ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်မိသည့် အဆိုပါ ကားပိုင်ရှင်မှာ ဦးဦးမောင် (ကားနံပါတ် ၁က/၆၃၆၄) ဖြစ်ပြီး ဦးအောင်သောင်း နှင့်အဖွဲ့မှ မြင်းခြံမြို့နယ် ကနေ ငှား လာတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
photo- The Voice Weekly
အမေစု နှင့် အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံမှ ဆရာဝန် ၊ ဆရာမ များ
ဓါတ်ပုံ - မြတ်သူ (MD, Asia Royal)
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား သမ္မတ အမိန့်အာဏာဖြင့်လွှတ်
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းနဲ့ သုံးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ကျနေရတဲ့ ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက် ၈း၀၀ နာရီခန့်က နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝန်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။ မည်သုိ့သော အကြောင်းကြောင့် ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း မသိရသေးပါ။
ပဒို မန်းငြိမ်းမောင် အထူးဧည့်သည်အဖြစ် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက် လေ့လာ
by The Voice Weekly on Monday, March 19, 2012 at 2:24am ·
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လွပ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ယနေ့ ( မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ) တွင် အင်းစိန်အကျင်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်သည် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အထူးဧည့်သည်အဖြစ် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက် လေ့လာ နေကြောင်း The Voice Weekly ၏ သတင်းရင်းမြစ် များကပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု မတရားအသင်း အက်ဥပဒေများဖြင့် ထောင်ဒါဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့် သုံးနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသော KNU ဗဟို ကော်မတီဝင် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်အား အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်ထည် ဖော်ရာတွင် ထိရောက်မှု ရှိစေရန်အတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိရေးကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးထံ တင်ပြပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက တရုတ်ပြည် ကူမင်း လေဆိပ် တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်အား တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခြင်း မပြုမှီ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေး၍မရဘဲ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ် ပြီးမှသာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက သတင်းမီဒီယာ၏ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုများကို ကြားခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကရင် အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့  ဆုံပွဲတွင် KNU နှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကရင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ကရင်အရပ်ဘက်
လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကရင်ဒေသခံများ ပါဝင်ကူညီပေးရန် ဦးအောင်မင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
by Yangon Press International on Monday, March 19, 2012 at 7:51am ·
မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် (YPI)
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံရပြီးနောက် မကြာမီရက်ပိုင်းက ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့် သုံးနှစ် ကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား ယနေ့နံနက်တွင် သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးကြီးမြင့်ကပြောသည်။
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၁ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးကြီးမြင့်က ‘ ပဒိုက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လာနိုင်တယ်။ KNU ဘက်ကနေ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ် ’’ ဟု ပြောသည်။
အခြားသတင်းဖေါ်ပြချက်များအရ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် KNU နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရာတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့်အတူနေပြည်တော်သို့ သွားရောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကရင်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံရာတွင်လည်း ၀န်ကြီးက ပဒိုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ယင်းတွေကဆုံပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
၎င်းက ‘ ၀န်ကြီးကပြောတဲ့နေရာမှာ ပဒိုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရမယ်။ သူတာဝန်ယူတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏ ကော်မတီဝင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ယင်းကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထံသို့ တရုတ်ပြည်မှတဆင့် သွားရောက်စဉ် ခွင့်ပြုရက်ထက် ရက်ကျော်နေထိုင်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခြင်းခံရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့အရောက်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဋ္ဌာန တံဆိပ်တုံး အတုပြုလုပ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၄၆၈ နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃/၁ တို့အရ တရားစွဲခံရကာ ထောင်ဒဏ် ခြောက်လစီ တစ်ပေါင်းတည်း ကျခံစေရန် အပြစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့် ထပ်မံစွဲချက်တင်ခြင်းခံရကာ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းနှင့် သုံးနှစ် ထပ်မံအမိန့်ချခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကလည်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၁ ပုဒ်မခွဲ ၁ အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ယင်းဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် မည်သည့်အခါမဆို စည်းကမ်းချက် မထားပဲဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရသူအား စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခု ထား၍ ဖြစ်စေ ၄င်းချမှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ် အတည်ပြုခြင်း ကိုဆိုင်းငံ့ထား နိုင်သည်။
ကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေး ကောင်စီ (ကာလုံ) ၏ သဘောတူညီချက်မလိုပဲ ပုဒ်မ ၄၀၁ ကိုသုံး၍ သမ္မတအမိန့်ဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်းသည် ယခုတကြိမ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ။
ပေးရင်ယူလိုက် ဒါပေမယ့် အန်အယ်ဒီကိုပဲမဲထည့်ပါ
Uploaded by BurmaVJMedia on 19 Mar 2012
လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ဟာ မက်လ ၁၇ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ လားရှိုးမြို့ကို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေက ကြိုဆိုခဲ့ကြသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ရန်တိုင်းအောင်စေတီရှေ့ ကွင်းပြင်မှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို မိန့်ခွန်းပြောသွားပါတယ် ။ တစ်ခါ သိန္နီမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှေ့မှာလည်း မိနစ် ၄၀ လောက် လူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လားရှိုးမြို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းက အသိမ်းခံ မြေကွက် တကွက် တစ်သောင်းနှစ်ထောင် ကျပ်
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ၁၂၆ ရပ်ကွက် နဝဒေးလမ်း စီမံချက်ဧရိယာမှာ ပါဝင်တဲ့ အနန္တမေတ္တာကျောင်းတိုက်မှာ မီဒီယာတွေနဲ့ ဒေသခံ အယောက် ၂၀၀ ခန့် တွေ့ဆုံပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ အလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခိုင်မောင်ရည်တို့ ဦးဆောင်ကာ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ မြေကွက်တွေကို ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် ဆက်လက် ထားရှိပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စီမံချက်ဧရိယာတွေထဲ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် အင်းဝလမ်း အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ချပေးထားတဲ့ မြေတိုင်းရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃၊ ၁၂၆၊ ၁၂၇၊ ၁၂၈၊ ၁၂၉၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉၊ ၁၆၀ စတဲ့ စုစုပေါင်း ရပ်ကွက် ၁၁ ခုမှ မြေကွက်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဝန်ထမ်းမြေကွက်တွေအတွက် မူလပေးသွင်းခဲ့တဲ့ မြေကွက်ဖိုးငွေ ကျပ် ၁၂၀၀၀ သာ ပြန်လည် ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကနေ ကြေညာလိုက်တဲ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိသာ လာရောက် ထုတ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေကွက် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ ကာလပေါက်ဈေး ကျပ် ၂၅ သိန်းကနေ သိန်း ၃၀ အထိ တန်တဲ့ အဲ့ဒီမြေကွက်တွေအတွက် လျော်ကြေးငွေ မလိုချင်ဘဲ သူတို့ရဲ့ မြေကွက်တွေကိုသာ ပြန်ပေးဖို့နဲ့ တဆင့်ခံ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့လဲ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို မီဒီယာတွေကို ပြောဆုိုခဲ့ကြပါတယ်။
မြို့တော်ခန်းမဘေး အရပ်ဝတ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးရဲတာဘယ်သူလဲ..
ဘင်္ဂလား မနိူင်ပါဘူး။ကျနော်တို့ ကတော့ရှုံးသွားတယ်။
ကျနော့် ကို face book မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က message ပို့ပြီး လှမ်းမေးတယ်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလား ဒေ့ ရှ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု မှာ ကျနော်တို့ရှုံးလား/နိူင်လား လို့ မေးတယ်။ “ဘင်္ဂလား မနိူင်ပါဘူး။ကျနော်တို့ ကတော့ရှုံးသွားတယ်ဗျာ”လို့ ပြန်ဖြေတော့ဘာ Message မှ ပြန်မပို့ တော့ ဘူး။ ကျနော် ကြိုးစားပြီး ရနိူင်သလောက် ရှာဖတ်ပါတယ်။ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ ပြောတာပါ။ “ဘင်္ဂလားမနိူင်ပါဘူး။ကျနော်တို့ ကတော့ရှုံးသွားပါတယ်ဗျာ”
“ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိူင်ငံတော် ”
၁။ မြန်မာနိူင်ငံသည် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် လွတ်လပ်သည့်နိူင်ငံဖြစ်သည်။
၂။ နိူင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိူင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၃။ နိူင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံတို့စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော
၄။ နိူင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိူင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီး နိူင်ငံတော်
၅။ နိူင်ငံတော်၏မြေထု၊ရေထု နှင့် လေထု တို့ ပါဝင်သော နယ်နိမိတ်သည် ဤဖွဲ့ စည်းပုံ
အခြေခံဥပဒေ အတည်ဖြစ်သောနေ့ တွင် တည်ရှိသည့် အတိုင်းဖြစ်သည်။
ပြောင်းဖူးပေါ်မှာ "မ" ဆိုတဲ့စာလုံးကို ရေးပီး မဲဆွယ်ယတြာ လုပ်ဆောင် နေပီဖြစ်တဲ့ ကြံ့ ဖွံ့ ဦးအောင်သိန်း လင်း!! "မပြောင်းဘူး"ဆိုတဲ့သဘောပါ အမြော်အမြင်ကြီးပါပေတယ် အဘ ရယ်!! ဒါနဲ့ ပြောင်းဖူးဆိုတာ ရေနွေး ပွတ်ပွတ်ဆူတဲ့ထဲမှာ “ပြုတ်" ရတာ မဟုတ်လါး?မနက်ဖြန်ဈေးမှာ ပြောင်းဖူးအစိမ်း ၄၈ ဖူးဝယ်ပီး မီးပြင်း ပြင်းနဲ့ ခပ်ကြာကြာ "ပြုတ်"ထားလိုက် အုံးမယ်!! ပြောင်းဖူးဆိုတာ"ကြာကြာပြုတ်" လေ ကောင်းလေဘဲ!!!
ဖြစ်ပြီး၊ဝင်ရောက်စစ်ဆေးသောစာရင်းစစ်အဖွှဲ့အပေါ် ဝတ္တရားကျေပြွန်မှု(လာဘ်ထိုးမှု) မရှိခဲ့သည့်
ပြန်လည်စီစစ်ပေးနိုင်ရန်မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်နေ အငြိမ်းစားစာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းတစ်
ဖျောက်ဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။မိမိထံရှိ အဆိုပါစာမိတ္တူပါအကြောင်းအရာများအား စာရင်းစစ်
အပ်နှံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးအတွက်ဦးအောင်သောင်းဧ။်သား ဦးနေအောင်ပိုင်ဆိုင်သော အိုင်ဂျီအီး ကုမ္ပဏီမှမြန်မာပွဲစားကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
တဖန်စီမံကိန်းအရာရှိများမှလည်း၎င်းလုပ်ငန်းများကိုပင် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းရေးဆွဲ ၍နိုင်ငံပိုင်ကျပ်ငွေအားထပ်မံထုတ်ယူသုံးစွဲထားခြင်း၊အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်းလစာ၊စားရိတ်များပါထပ်မံကုန်ကျထားခြင်း စသဖြင့်တရုပ်ချေးငွေဖြင့်အပြီးအပ်နှံထားသောလုပ်ငန်းများကိုထပ်မံလုပ်ငန်းပြသုံးစွဲခဲ့သည့်အလွဲသုံးမှုများကြီးမားစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့မှု
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေ လ (၅) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားမန္တလေးတိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ
များဆောင်ရွက်ရာတွင်လုပ်ငန်းများအလိုက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ အတိုးဖြင့်ချေးငွေ
(၁) Hydraulic Steel Structure (Lot-1)လုပ်ငန်း၊Transmission Line လုပ်ငန်း၊ ပိုဇိုလန်
စက်ရုံဓါတ်အားခွဲရုံနှင့်ကျောက်ပန်းတောင်းဓါတ်အားခွဲရုံလုပ်ငန်းများအတွက် Service Charges
တပ်ဆင်လုပ်အားခ USD (155,102) အပါအဝင်USD( 2,196,435) တန်ဘိုးရှိသော
စာချုပ်အမှတ် 26/DHP/2003-2004 အား(၂၄-၃-၂၀၀၄)တွင် China National Electric
Equipment Corporation (CNEEC) နှင့်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၂)ရဲရွာRCC dam (Roller Compacted Concrete dam) တမံသုံး Pozzolan ထုတ်
လုပ်ရေးအတွက်Grinding Plant ပိုဇိုလန်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား
Service Charges တပ်ဆင်လုပ်အားခအပါအဝင် USD( 3,750,000 )တန်ဘိ်ုးရှိသော
စာချုပ်အမှတ် 19/DHP/2002-2003 အား(၂၃-၁၂-၂၀၀၂)တွင် SIAM Industrial
Corporation Ltd နှင့်နိုင်ငံပိုင်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြု၍ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၃) Hydraulic Steel Structure (Lot-2) လုပ်ငန်းအတွက် Service Charges
USD(2,051,791.50) အပါအဝင် USD(12,495,216) တန်ဘိုးရှိသော
စာချုပ်အမှတ် 38/DHP/2005-2006 အား(၁၅-၇-၂၀၀၅)တွင် Joint Venture
Consortium of Citic Technology Co.,Ltd နှင့်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၄) Electrical and Mechanical Equipment လုပ်ငန်းအတွက် Service Charges
တပ်ဆင်လုပ်အားခ USD (6,295,332.89) အပါအဝင် USD (113,133,548.00)
တန်ဘိုးရှိသောစာချုပ်အမှတ် 39/DHP/2005-2006 အား(၁၅-၇-၂၀၀၅)တွင်
Joint Venture Consortium of Citic Technology Co.,Ltd and
Sinohydro Corporation Limited (CCYW) နှင့်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၅) RCC (Roller Compacted Concrete) Conveyance & Placing လုပ်ငန်း
အတွက် Dam Instr--ment နှင့် Equipment တန်ဘိုးအပါအဝင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခ
USD(46,325,465.00) တန်ဘိုးရှိသောစာချုပ်အမှတ် 43/DHP/2005-2006 အား
(၁-၈-၂၀၀၅)တွင် China Gezhouba Water & Power (Group) Co.,Ltd (CGGC) နှင့်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၆) 230KV Transmission Line & Substation လုပ်ငန်းအတွက် Service Charges
အပါအဝင် USD (45,849,336.00) တန်ဘိုးရှိသောစာချုပ်အမှတ်
45/DHP/2005-2006 အား (၂-၉-၂၀၀၅)တွင်China National Heavy Machinery
Corporation (CHMC) နှင့်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Colenco အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခ Swiss Frances CHF
ငွေလုံးစာရင်းတို့တွင်သုံးစွဲထားပြန်သဖြင့် ရဲရွာစီမံကိန်း တွင်လုပ်ငန်းတူများအတွက်ငွေကို
လုပ်ငန်းအပြီးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဌာနပိုင် ယာဉ်စက်များ၊စက်သုံးဆီများ၊
မန္တလေးတိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ရဲရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအားအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေး
လျာထားသည့် (၇၉၀)မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘဲ၊ (၂၀၀)မဂ္ဂါဝပ်ဝန်းကျင်သာထုတ်လုပ်နိုင်
သို့ပါ၍ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား မန္တလေးတိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ
ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်
ရွက်ပေးပါရန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
အီးယူက မြန်မာအပေါ် ဘယ်လိုဒဏ်ခတ်သလဲ
by Swe Swe Kyi on Monday, March 19, 2012 at 12:25pm ·
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလကုန်မှာ နောက်တနှစ် သက်တမ်းတိုးတဲ့ အီးယူဒဏ်ခတ်မှုမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ သမက် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်း ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးဇော်ဖြိုးဝင်းကိုပါ ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မိသားစုဝင် ၅ဝဝ ကျော် စာရင်းမှာ ထဲ့သွင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူက ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့နေရာမှာ
-မြန်မာစစ်သံမှူးတွေကို နှင်ထုတ်ခြင်း လက်နက်မရောင်းခြင်း
-အီးယူနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိမ်းချုပ်ထားခြင်း၊
-အီးယူကို အထည်အလိပ်တင်သွင်းခွန်လျော့ပေးတဲ့ ယေဘုယျအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းစတဲ့ နည်းတွေနဲ့
ဦးဇော်ဖြိုးဝင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့သမီး ဒေါ်သန္တာရွှေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပီးကထဲက အီးယူ ဒဏ်ခတ်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ၊ ခုဆိုရင် ဦးဇော်ဖြိုးဝင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ဘဏ်တွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငွေစာရင်းဖွင့်ခွင့်မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒေါ်လာငွေစာရင်းဖွင့်မရတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်
ဦးအောင်သောင်းရဲ့သား ဗိုလ်မှူး မိုးအောင်နဲ့ဇနီး၊ ဦးအောင်သောင်းရဲ့သား အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီနဲ့ အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ ဦးနေအောင်၊ ဦးအောင်သောင်းရဲ့သားလဲဖြစ် အိုင်ဂျီအီးကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလဲဖြစ် ဒု ဗိ်ုလ်ချုပ်မှူးကြိးမောင်အေးသမက်လဲဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးပြည့်အောင်၊ ဦးအောင်သောင်းသမီး ခင်ငုရည်ဖြိုး၊ ဦးအောင်သောင်းသမီး ဒေါက်တာ သုနဒ္ဒအောင်၊ ဦးအောင်သောင်းသမီး အေးမြတ်ဖြိုးအောင်အပြင် ဦးအောင်သောင်း မိသားစုပိုင်တဲ့ အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီနဲ့ Queen Star ကွန်ပြူတာကုမ္ပဏီတွေပါ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အီးယူ ဒဏ်ခတ်စာရင်းမှာ ပါနေတာ တွေ့ရပါတယ်၊
မြန်မာစစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ နောက်လိုက်တွေ စီးပွားရေးအထိနာအောင် တင်းကျပ်တဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေချမှတ်ဘို့ အီးယူကို တွန်းအားပေးတော့မယ်လို့ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွင်ဘရောင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်
အီးယူဒဏ်ခတ်မှုဟာ WTO ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဆန့်ကျင်သလား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွင်ဘရောင်းပြောတဲ့ စကားကို တိတိကျကျ ပြောရရင် မြန်မာစစ်အစိုးရ စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုအသစ်တွေ ကျန်တော်တို့ ချမှတ်သင့်တယ်-ဒိကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး အီးယူက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အရေးယူနိုင်အောင် ကျန်တော်တို့ တွန်းအားပေးမယ်-ဒီဒဏ်ခတ်မှုမျိုးဟာ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့နောက်လိုက်တွေရဲ့ စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုသွားတာပါ။
ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွင်ဘရောင်းပြောသလို အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်တာ တကယ်ဖြစ်မဖြစ် အတိအကျ မသိရသေးပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အီးယူက လက်ရှိ ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ ပြဌာန်းမှုတွေ ထိထိရောက်ရောက်မရှိဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အခမဲ့လိုက်ပါပေးနေတဲ့ အမေရိကန်ရှေ့နေ Mr Jared Genser နဲ့ နယူးရောက် ဥပဒေတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဥပဒေ ပါမောက္ခ Mr Robert Howse တို့က ယူဆပါတယ်၊
ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူက ကုန်သွယ်ရေးဒဏ်ခတ်မှုဟာ WTO ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်ညီသလားဆိုတဲ့ စာတမ်းမှာ ခုလို ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ပိုပီးတင်းကျပ်တဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုမျိုးလုပ်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး အီးယူမှာ အခြေအတင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ဒီလိုဒဏ်ခတ်မှုမျိုးက WTO နဲ့ သဘောတူထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကို အီးယူအဖွဲံဝင်နိူ်င်ငံတွေက ချိုးဖောက်ရာ ကျလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အီးယူဒဏ်ခတ်မှုဟာ WTO ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေရိကန်ရှေ့နေ Mr Genser နဲ့ ပါမောက္ခ Mr Howse တို့က အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြထားပါတယ်။
၂ဝဝ၇ ခု နုိူဝင်ဘာလမတိုင်ခင်က မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အီးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ပြန်ကြည့်ရင် ထိရောက်မှုနည်းနေပါတယ်-ဥပမာ မြန်မာစစ်အစိုးရ စစ်သံမှူးတွေကို အီးယူနိုင်ငံတွေက နှင်ထုတ်ဘို့ ဒဏ်ခတ်မှုချမှတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဆင့်ကိုတော့ အီးယူက လက်ခံထားတဲ့အချက် ဖြစ်တယ်လို့ စာတမ်းမှာ ထောက်ပြထားပါတယ်။ နောက်တချက်က မြန်မာစစ်အစိုးရက တရုတ် ရုရှားနဲ့ အိန္နိယဆီကနေ လက်နက်တွေရနေတာမို့ အီးယူက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် လက်နက်မရောင်းရေး ပိတ်ဆို့တာလဲ မထိရောက်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်၊
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အီးယူက ဗီဇာပိတ်ဒဏ်ခတ်ထားပေမဲ့ နိုင်ငံတကာညီလာခံတွေ အစိုးရအဖွဲ့များဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကျတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တက်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ခြွင်းချက်တွေရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဥရောပကို အပမ်းဖြေခရီး မလာနိုင်အောင် လောက်သာ အီးယူရဲ့ ဗီဇာပိတ်ဆို့မှုက တတ်နိုင်တယ်လို့ ဝေဖန်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူရဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုပိတ်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ရင် အစိုးရပိုင် အချိုရည်ကုမ္ပဏီတွေ၊ သတ္တူတွင်းတွေစတဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေသာများနေပီး မြန်မာ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းစတဲ့ အကြီးစား အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမပါဘဲ ဖြစ်နေပါတယ် ဒါကြောင့်လဲ အီးယူကုမ္ပဏီတွေက စစ်အစိုးရပိုင်တဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကို ငွေဆက်ပံ့ပိုးနေနိုင်တာဖြစ်တယ်-အီးယူအဖွဲ့ဝင် ပြင်သစ်ပိုင် Total ရေနံကုမ္ပဏီတခုထဲကတင် MOGE ကို တနှစ် ဒေါ်လာသန်း ၄၅ဝ လောက် ရင်းနှီးနေပါတယ်။
အီးယူရဲ့ တချိုံ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကျတော့လဲ စစ်အစိုးရက အီးယူနဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့အတွက် အလဟသ ဖြစ်နေပါတယ်-ဥပမာ-ဥရောပမှာရှိတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ အရာရှိတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ ဥရောပမှာ စစ်အစိုးရအရာရှီတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုက မရှိသလောက်ဖြစ်နေလို့ပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေရိကန်ရှေ့နေ Mr Genser နဲ့ ပါမောက္ခ Mr Howse တို့က ထောက်ပြထားပါတယ်
ဒီချို့ယွင်းချက်တွေကို အီယူရဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှုမှာ ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက် သစ် ကျောက်သံပတ္တမြား အထည်အလိပ်စတဲ့ မြန်မာထွက်ကုန်တွေပါတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၄ဝဝကျော်ဘို့ နစ်နာသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်ဒဏ်ခတ်မှုအတိုင်းအတာက စစ်အစိုးရအကျိုးစီးပွား ထိခိုက်လောက်အောင် ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် အမေရိကန်စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုက ပြန်တွက်ရင် အဲဒီနှစ်မှာ အမေရိကန်ဘဏ်တွေက မြန်မာပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃သိန်း ၂သောင်ဘိုး ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပီး ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၃သန်းဘိုးရှိတဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ငွေပေးငွေယူလုပ်မှုကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့တွေက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ငွေမချေးအောင် အမေရိကန်က သြဇာသုံးထားတဲ့အတွက် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်းတရာကျော်ဘိုး နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ နစ်နာသွားစေခဲ့ပါတယ်။
၂ဝဝ၃ ခုကစပီး မြန်မာသွင်းကုန်တွေကို အမေရိကန်က လက်မခံဘဲပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး WTO ကိုတိုင်တန်းတာမျိုး တခါမှ မလုပ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်၊ အဲသလို မြန်မာစစ်အစိုးရက WTO ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ကို တိုင်ကြားခဲ့ရင်လဲ စစ်အစိုးရရဲ့ လု့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေပါ WTO ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေရိကန်ရှေ့နေ Mr Genser နဲ့ ပါမောက္ခ Mr Howse တို့က ထောက်ပြထားပါတယ်။
အီးယူဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တုံးကလဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆာချုးဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ မက်ဆာချုးဆက်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေဟာ WTO စည်းမျဥိးနဲမညီဘူးဆိုပီး WTO မှာ တရားစွဲခဲ့ပါတယ်၊ ဒီဥပဒေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စီးပွားလုပ်နေတဲ့ မက်ဆာချုးဆက်ပြည်နယ်က နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလုံးက စီးပွားရေးအဆက်ဖြတ်ရေး ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အီးယူဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုကို ဘယ်လောက် သဲကြီးမဲကြီး တိုက်ဘို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သလဲ ထင်ရှားတဲ့ သက်သေဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်ရှေ့နေ Mr Genser နဲ့ ပါမောက္ခ Mr Howse တို့က ယူဆပါတယ်။
နိဂုံးပိုင်းမတော့ အီးယူက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ကုန်သွယ်ရေး ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ထပ်ပီး တင်းကျပ်မယ်ဆိုရင် WTO စည်းမျဉ်ိး ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Mr Genser နဲ့ ပါမောက္ခ Mr Howse တို့က ဥပဒေရှုထောင့်ကနေ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်ပြီး အီးယူဒဏ်ခတ်မှုတချို့ကို ပြန်လျှော့ပေး
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချိုံကို ပြန်ရုတ်သိမ်းတဲ့နေရာမှာ အစိုးရသစ်ထဲက ဒုသမတ စိုင်းမောက်ခမ်းအပြင် ၀န်ကြီး ဒုဝန်ကြီးတချို့ကို ဒဏ်မှုက တနှစ် ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြင် တချိုံ အီးယူရဲ့ လူလူချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေကို သုံးသပ်မဲ့အဖွဲံအစည်းတွေထဲမှာ အန်အယ်ဒီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုပါ ပြန်လည် ထဲ့သွင်းပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရသစ်တက်လာပီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အီးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြင်ဆင်သက်တမ်းတိုးတဲ့နေရာမှာ အရပ်သားဝန်ကြီး ၄ ဦးနဲ့ အရပ်သားဒုဝန်ကြီး ၁၈ ဥိးကို အီးယူ ဒဏ်ခတ်မှုကနေ ယာယီ တနှစ် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
တနှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ ဒဏ်ခတ်မှု အမျိုးအစားတွေကတော့ အီးယူနိုင်ငံတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ထားတာ ရုတ်သိမ်းတဲ့အချက်နဲ့ အဲဒီဝန်ကြီးတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားတာ ဖွင့်ပေးတဲ့အချက်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင့်မြင့် အီးယူကိုယ်စားလှယ်တွေ သွားရောက်ရေး ပိတ်ပင်ထားတာကိုလဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်ထိ ရုတ်သိမ်းပေးထားပါတယ်။
အီးယူဒဏ်ခတ်မှုကနေ ယာယီ တနှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့ အရပ်သားဝန်ကြီး ၄ ဦးကတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေး အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဟိုတယ် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂ ခုလုံး တွဲကိုင်ထားတဲ့ ၀န်ကြှီး ဦးတင့်ဆန်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဍမောင်လွင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုဝန်ကြီး ၁၈ ဦးကလဲ အရပ်သားတွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာက အီးယူဒဏ်ခတ်မှုကနေ ယာယီ တနှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့ စာရင်းမှာ ဒုသမတ စိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းတို့လဲ ပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အရပ်သားလို့ အီးယူက ယူဆတဲ့ ဒုသမတ စိုင်းမောက်ခမ်းရယ် ၀န်ကြီး ၄ ဥင်္ီးရယ် ဒုဝန်ကြီး ၁၈ ဦးရယ် ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းကလွဲရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတဖွဲ့လုံးက ၀န်ကြီး ဒုဝန်ကြီးတွေအပြင် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးက ၀န်ကြီးချုပ်သစ်အားလုံးကိုလဲ အီးယူက ခါတိုင်းဒဏ်ခတ်သလို နောက်တနှစ် ဆက်ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့စာရင်းမှာ ထဲ့ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုကနေ တနှစ် ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေရဲ့ အခြေအနေကိုလဲ ကင်းလွတ်ခွင့် တနှစ်ကာလအတွင်း ဆက်ပီး သုံးသပ်သွားမယ်လို့ အီးယူက တိတိကျကျ ရှင်းထားပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရသစ်ထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ မပတ်သက်သူတွေနဲ့ အီးယူအကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ဆွေးနွေးရာမှာ အဓိကကျသူတွေကို ဒဏ်ခတ်မှုကနေ တနှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရတဲ့အကြောင်းက အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်မှု အနာဂတ်မှာတိုးတက်လာအောင် အားပေးဘို့အချက်-ဒီမိုကရေစီရေး ခိုင်မာဘို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားဘို့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာအပေါ် အီးယူဒဏ်ခတ်စာရင်းမှာ အီးယူကောင်စီက ရှင်းလင်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ဒီနှစ်အတွက် အီးယူဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ အသေးစိတ် စာရင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ အရင်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ယခင် နအဖအဖွဲံဝင်ဟောင်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲံ မိသားစု-ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးနဲ့ မိသားစု စတဲ့သူတွေကို အီးယူက ဆက်လက်ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ပြင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သစ် ဗ်ုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးကိုလဲ နောက်တိုး ဒဏ်ခတ်စာရင်းမှာ ထဲ့ထားပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် စစ်တိုင်းမှူးနဲ့ ဒုစစ်တိုင်းမှုးအသစ်တွေကိုလဲ ဒဏ်ခတ်ထားသလို နေပြည်တော်တိုင်းမှုးဆိုရင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းရီကိုပါ ဒဏ်ခတ်ထားပါတယ်။
အကျဉ်းဦးစီးဌာန အကြီးအကဲတွေ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတွေပါ အီးယူက ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ပြင် အစိုးရစီးပွားရေးပေါ်လစီနဲ့ တခြားစစ်အစိုးရနဲ ပတ်သက်နေသူတွေထံက အကျိုးအမြတ်ရသူစာရင်းမှာ ဦးတေဇ-ဦးအောင်ကိုဝင်း-ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ခေါ် စတီဗင်လော ဦးလောစစ်ဟန် ဦးခင်ရွှေစတဲ့ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုလဲ အသေးစိတ်ထဲ့သွင်းထားပါတယ်။ (ဦးတေဇသား ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇကတော့ လန်ဒန်ရှေ့နေတွေငှားပီး အီးယူကိုတရားစွဲတာ ၂၀၁၂ ခု မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ အနိုင်ရတဲ့အတွက် ဒဏ်ခတ်စာရင်းက လွတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်)။
အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် အီးယူအနေနဲ့ တနှစ်ပီးတနှစ် သက်တမ်းတိုးလာတဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က မြန်မာအပေါ် အီယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပီး တနှစ်ထပ်ပီး တိုးတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီးယူအနေနဲ့ အစိုးရသစ်အပေါ် သူ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူသံအမတ် David Lipman က ပြောပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ အရပ်သားများများပါလာတဲ့ လက္ခဏာရပ်က တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်လိုအပ်နေတဲ့ ပေါ်လစီသစ်တွေ ချမှတ်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဆိူင်ရာ တိုးတက်မှုအပေါ် အားပေး တုံ့ပြန်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်း အီးယူက ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့
အီးယူကောင်းစီ ကြေငြာချက်မှာလဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပြင် အီးယူဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး ကုမ္ပဏီများစာရင်းကိုကြည့်ရင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်စာရင်းမှာ ကုမ္မဏီ ၁၀၉၇ ခုသာ ရှိတော့တာမို့ မနှစ်ကစာရင်းထက် ကုမ္မဏီ ၁၁၀ လျော့သွားတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှုကိုလဲ သိသိသာသာ လျှော့ပေးလာတဲ့သဘောရှိပါတယ်။
ဟိုတုံးကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက သစ်လုံး သစ်ထုတ်ကုန်တွေ ရွေ ကြေးနီစတဲ့ သယံဇာတတွေ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေကို အီးယူအဖွဲ့နိုင်ငံတွေကို ၀ယ်ယူ သယ်ပို့ တင်သွင်းခွင့် အီးယူဆန်ရှင်က ပိတ်ထားပေမဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အီးယူဒဏ်ခတ်မှု ပြင်ဆင်ချက်မှာ လူလူချင်းစာနာတဲ့ စီမံကိန်းတွေ အစီအစဉ်တွေအတွက်တော့ အကျုံးမ၀င်စေရလို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်တာတွေ့ရပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူလူချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေကို အီးယူဘက်က မြှင့်တင်လိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် လူလူချင်းစာနာတဲ့အကူအညီဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတွေ အစီအစဉ်တွေ သတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စ သုံးသပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အန်အယ်ဒီအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအုပ်စုတွေ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်တယ်ဆူိုတဲ့အချက်ကို ဒီနှစ် ဒဏ်ခတ်မှု ပြင်ဆင်ချက်မှာ အသားပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ခုလိုမျိုး အရပ်သားဝန်ကြီး ဒုဝန်ကြီးတွေကို ဒဏ်ခတ်မှုကနေ တနှစ် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ အီးယူပေါ်လစီဟာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုပီး ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့လဲ ကိုက်ညီတယ်လို့ လန်ဒန်မြို့ထုတ် Financial Times သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကနေ ထောက်ခံထားပါတယ်။
လာမဲ့ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ရွေးကောက်ဖြစ်ရင် ဒဏ်ခတ်တာတွေ လျှော့ပေါ့ဘို့ စဉ်းစားမယ်လို့ အီးယူက ပြောတဲ့အတွက် စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းက အသိမ်းခံ မြေကွက် တကွက် တ...
မြို့တော်ခန်းမဘေး အရပ်ဝတ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးရဲတာဘယ်သူ...